Drug smuggler arrested at Yangon International Airport | Yangon Aerodrome
Drug smuggler arrested at Yangon International Airport
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာမည့် ခရီးသည်တစ်ဦးထံမှ စိတ်ကြွဆေးပြားများ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြပါသည်။ ယခု စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရရှိမှုဖြစ်စဉ်အပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ တရားဝင် Facebook Page တွင် အောက်ပါ link အတိုင်း သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါ သည်။ https://www.facebook.com/yangonpolice/posts/1624996790962915
Our security team detected smuggled narcotics in the luggage ofapassenger bound for Kuala Lumpur, Malaysia at Terminal 1 on the morning of 18 August, 2018. This detection is the second attempted smuggle of narcotic followingarecent case on 14 August 2018.
For more details, please refer to Yangon Police Official Facebook page: https://www.facebook.com/yangonpolice/posts/1624996790962915
By Yangon Aerodrome| 2018-08-24T09:27:43+00:00	August 24th, 2018|